Hoteel loo ekeysiiyay xero jabhad oo laga dhisayo Colombia | Saxil News Network
Xubno ka tirsan jabhaddii hubka dhigtay ee FARC ayaa dalka Colombia ka dhisaya hotel weyn oo ay ka hirgalinayaan qaab nololeedkii jabhadnimada ee ay iyaga soo mareen.
Hoteelka ayaa waxa laga dhisey meel kayn ah, waxaa la sameeyay dariiqyo yaryar oo dhirta dhex xulaya, iyo cunto lagu karinayo foorno dhaqameed.
Mucaaradka Colombia oo hubka iska dhigaya
Colaadda dalka Colombia oo laga heshiiyay
Gurmadka samata bixinta Colombia oo weli socda
Soomaali ka qeyb galay shirka dhalinyarada ee dalka Colombia
Halkan oo mar ahaan jirtay meel aanan la tagi karin oo ciidammada dowladda iyo kuwa jabhadda FARC ay isku hor fadhiyeen sanooyin badan ayaa hadda la doonayaa in dadka dalxiiska ah ay tagaan si ay aragti uga qaataan nolosha jabhadnimada.
Image captionKaynta laga dhisayo hotelka
Jabhaddan ayaa saxiixday heshiis nabadeed, iyada oo inta badan ay hubkii dhigeen xubnihii dagaalami jirey. Heshiiska waxaa qeyb ka ahaa in qof kasta oo jabhadda ka tirsanaa uu helayo lacag dhan $215 doolar bishiiba muddo labo sano ah si ay dib ugu dhisaan noloshooda.
Qaar badan oo jabhadda ka mid ahaan jirey ayaa lacagtaas u isticmaalay samaynta iskaashatooyin ay ka mid tahay tan hadda hoteelka dhiseysa.
Einer Lopez oo horey u ahaan jirey taliyeyaasha FARC ayaa sheegay in qorshahan hoteelka ay aad ugu hanweynyihiin, iyaga oo hadda dhisey dhismo hal dabaq ah oo ay ugu magacdareen Aqalka Cagaaran, magacaas oo ay ka keeneen xaruntii dhexe ee jabhadda looga talin jirey oo iyadu magacaas lahayd.
Image captionEiner Lopez
Waxaa hoteelka laga dhisi doonaa aqalo yaryar oo u eg kuwii jabhadda ay isticmaali jirtay iyo waxyaabo kale oo qofka dareensiin kara nolosha jabhadnimada.
Balse dadka raba in ay iska raaxaystaan, waxa ay dagi karaan qolalka dhismaha Aqalka Cagaaran.
Cuntada hoteelka laga helo xitaa waa tii aay jabhadda karsan jirtay.
Image captionWaxa kale oo ay samaysteen wartan si ay u tarmiyaan kalluun badan